Fitaovana fanamboarana teny. Rindrambaiko fanarenana teny. Avereno ny fisie DOC & DOCX.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,495)
Nahoana DataNumen Word Repair?
Ny tahan'ny fanarenana dia ny most mason-tsivana lehibe momba ny vokatra fanarenana Teny. Miorina amin'ny fitsapana feno nataonay, DataNumen Word Repair manana ny tahan'ny fanarenana tsara indrindra, tsara lavitra noho ny mpifaninana hafa rehetra eny an-tsena!
Mianara bebe kokoa momba ny fomba DataNumen Word Repair mifoka ny fifaninanana
Injeniera fizika https://helpwithphysics.com
Ry tsara ô, MISAOTRA! Tsy mino aho fa nahavita nanamboatra azy ianao! Efa nanandrana ara-bakiteny ny zavatra hafa rehetra aho - mahagaga izany, ary tena izany aho
Tena afa-po aho. Manoro anao ny rehetra aho. mirary anao
Vahaolana amin'ny fanarahana ny lesoka mahazatra noho ny kolikoly antontan-taratasy
Ny rakitra xxxx.docx dia tsy azo sokafana satria misy olana amin'ny atiny
Tsy azo aseho amin'ny antontan-taratasy maloto ny sary
Endri-javatra lehibe ao DataNumen Word Repair v4.2
Fanohanana amin'ny fanamboarana antontan-taratasy Microsoft Word 6.0, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ary Word for Office 365.
Taratasy fanohanana novokarin'ny Word for Windows sy Mac.
Tohano hamerenana ny lahatsoratra, sary ary fandrafetana ao anaty rakitra Word.
Fanohanana hamerenana latabatra.
Fanohanana amin'ny famerenana ireo lisitra misy bala na isa.
Fanohanana hamerenana amin'ny laoniny ny format sy ny rohy.
Fanohanana hamerenana ireo tsoratadidy.
Tohano hamerenana ny rakitra Word avy amin'ny temporary fisie rehefa misy ny voina data.
Tohano hanamboarana ireo rakitra Word doc sy docx amin'ny haino aman-jery maloto, toy ny disk floppy, Zip kapila, CDROM, sns.
Tohano hanamboarana rakitra Word doc sy docx.
Tohano hahitana sy hisafidy ireo rakitra Word ho amboarina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Tohano ny fampidirana miaraka amin'ny Windows Explorer, amin'izay ianao afaka manamboatra rakitra doc sy docx miaraka amin'ny menio ny takelaka (tsindrio havanana) an'ny Windows Explorer.
Tohano ny masontsivana baikon'ny baiko (DOS prompt) amin'ny fanamboarana ireo rakitra Word.
mampiasa DataNumen Word Repair hamerenana ireo rakitra momba ny teny simba
Rehefa simba na simba ny antontan-taratasinao Word (* .DOC sy * .DOCX rakitra ary tsy azonao atao ny manokatra azy ireo ara-dalàna, dia azonao atao ny mampiasa DataNumen Word Repair mba hijerena ireo rakitra Word ary hanangona angona betsaka araka izay tratra.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenana rakitra rakitra simba na simba miaraka amin'i DataNumen Word Repair, akatony azafady ny Microsoft Word sy ireo rindranasa hafa mety hiditra amin'ny fisie Word.
Safidio ny rakitra Word .doc / .docx Word simba na simba hanamboarana:
Azonao atao ny mampiditra ny anaran'ny rakitra Word .doc / .docx mivantana na kitiho ny bokotra hijerena sy hisafidianana ilay rakitra. Azonao atao koa ny manindry ny bokotra hahitanao ny rakitra tokony hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Default (nitranga in- DataNumen Word Repair dia hamonjy ny rakitra Word raikitra ho xxxx_fixed.doc, izay xxxx no anaran'ilay loharano Word .doc / .docx rakitra. Ohatra, ho an'ny rakitra Word source Damaged.docx, ny anarana default ho an'ilay fisie raikitra dia ho Damaged_fixed.doc. Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Tsindrio ny bokotra. DataNumen Word Repair start scanning sy fanamboarana ny rakitra Word loharano.
Aorian'ny fizotry ny fanamboarana, raha afaka amboarina soa aman-tsara ny rakitra Word loharano dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
DataNumen Word Repair 3.7 dia navoaka tamin'ny 12 Desambra 2020
DataNumen Word Repair Navoaka tamin'ny 3.5 Novambra 2 ny 2020
DataNumen Word Repair Navoaka tamin'ny 3.4 Novambra 4 ny 2019
DataNumen Word Repair 3.3 dia navoaka tamin'ny 23 Mey 2019
Mampiasà teknolojia AI handinihana ny fisie.
DataNumen Word Repair 3.2 dia navoaka tamin'ny 14 martsa 2019
DataNumen Word Repair 3.1 dia navoaka tamin'ny 21 Janoary 2019
Teny fanohanana 2019.
Hatsarao ny motera famaritana.
DataNumen Word Repair 3.0 dia navoaka tamin'ny 25 Oktobra 2018
Hatsarao ny fanarenana ny indentsin'ny andalana.
DataNumen Word Repair Navoaka tamin'ny 2.9 Aogositra 25 ny 2018
Hatsarao ny famerenana ireo lahatsoratra.
DataNumen Word Repair Navoaka tamin'ny 2.8 Jolay 16 ny 2018
Tohano ny antontan-taratasy Word for Office 365.
DataNumen Word Repair 2.7 dia navoaka tamin'ny 18 Janoary 2018
Fanohanana hamerenana angona bebe kokoa.
DataNumen Word Repair Navoaka tamin'ny 2.6 Novambra 9 ny 2017
Tohano Windows 10.
Office ofisialy 2016.
DataNumen Word Repair 2.5 dia navoaka tamin'ny 3 Jolay 2015
DataNumen Word Repair 2.1 dia navoaka tamin'ny 20 Jolay 2013
Tohano hanisy sary ao amin'ilay antontan-taratasy sitrana.
Tohano ny endri-tsoratra aziatika.
DataNumen Word Repair 2.0 dia navoaka tamin'ny 8 Jona 2013
Tohano ny endrika Word 2007, 2010 ary 2013.
Ovao ny interface interface an'ny fampiharana.
DataNumen Word Repair 1.1 dia navoaka tamin'ny 4 Jona 2005
Fanohanana amin'ny fanamboarana ny antontan-taratasy Microsoft Word 2003.